နွားနို့ကောင်း/မကောင်းကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ? - Lifestyle Myanmar
နို့အမျိုးအစားအများစုက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်လွန်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာထိ သောက်သုံးနိုင်ပေမယ့် သက်တမ်းလွန်နို့ကို မသောက်သုံးမီမှာ တစ်ချို့အချက်တွေကို ထည့်စဉ်းစားတာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ နွားနို့ကောင်း/မကောင်းကို ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ?
ပထမဆုံးလက္ခဏာက နို့ရဲ့အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ နို့တွေ မကောင်းဘူးလို့ သံသယရှိရင် ဖန်ခွက်ထဲကို လောင်းထည့်ပြီး အပျစ်အကျဲ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အလုံးအခဲတွေပါနေရင် စားသုံးဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
သိုးသွားတဲ့ နို့ရဲ့ထင်ရှားသော လက္ခဏာမှာ သူ့ရဲ့အနံ့ဖြစ်ပါတယ်။ နို့သိုးသွားတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားထုတ်တဲ့ လက်တစ်အက်ဆစ်ကြောင့် ထူးခြားတဲ့အချဉ်နံ့ ထွက်လာပါတယ်။ နို့အများစုက pasteurization လို့ခေါ်တဲ့ နို့ကို သတ်မှတ်အပူချိန်ထိ အပူပေးပြီး ပိုးသတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်သွားရပါတယ်။ သို့သော် pasteurization က ဘက်တီးရီးယားအားလုံးကို မသတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျန်ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ဆက်ကြီးထွားပြီး နောက်ဆုံးမှာ နို့ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
နို့ရဲ့အရောင်ကလည်း ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ Caseins က နို့ထဲမှာရှိတဲ့ အဓိက ပရိုတင်းအမျိုးအစားတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎်ငးက ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ဖောစဖိတ်တို့ ပေါင်းစပ်ကာ Micelles လို့ခေါ်သော သေးငယ်တဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေကို ဖွဲ့စည်းပါတယ်။ အလင်းက ဒီ micelles တွေကို ရိုက်ခက်တဲ့အခါ နို့ရဲ့ ပုံမှန်အဖြူရောင် အသွင်အပြင်ကို ရရှိပါတယ်။ သို့သော် နို့တွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ သူ့အရောင်က အဝါဖျော့ရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ ထို့အပြင် အစွန်းတစ်ဝိုက်မှာ မာနေတဲ့ မျက်နှာပြင်အလွှာ ရှိ/မရှိကို ဂရုပြုပါ။
နို့ကို ကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
နွားနို့ဝယ်ပြီးရင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အမြန်သိမ်းထားပါ။
ရေခဲသေတ္တာရဲ့ အပူချိန်ကို ၃၈ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်(3°C)နှင့် ၄၀ဒီဂရိဖာရင်ဟိုက်(4°C) အကြား ထားပါ။
နွားနို့ကို ရေခဲသေတ္တာတံခါးက စင်ပေါ်တင်မယ့်အစား အတွင်းခန်းစင်ပေါ်မှာထားပါ။
အသုံးပြုပြီးတိုင်း နို့ကို အမြဲတမ်းအဖုံးတင်းတင်းပိတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ပြန်ထည့်ပါ။